Eyona coil yoMvelisi kunye neFektri eNgcono EWenyue
Ukuqamba, ukugqwesa kunye nokuthembeka ngamaxabiso aphambili enkampani yethu. Le migaqo namhlanje kunakuqala yenza isiseko sempumelelo yethu njengeshishini eliphakathi elisebenza ngobukhulu kubathengi be-Intanethi kumazwe angaphandle China 304 316 En / DIN 1.4401 Hot asongwe Stainless Ikhoyili Duplex 904L 2205 2507, Ukunyaniseka umgaqo wethu, ukusebenza ngobungcali yethu umsebenzi, inkonzo yinjongo yethu, kunye nokwoneliseka kwabathengi likamva lethu!
Ukuthumela ngaphandle kwi-China i-China 1.4462 I-coil yentsimbi engenasici, i-1.4014 I-coil yentsimbi engenasici, Ukuphumelela ukuzithemba kwabathengi, owona Mthombo umisele ukuthengisa okunamandla kunye neqela emva kokuthengisa ukuhambisa eyona mveliso kunye nenkonzo. Owona mthombo uhleliyo uluvo lokuba "Khulisa umthengi" kunye nefilosofi "ejolise kubathengi" ukufezekisa intsebenziswano yokuthembana kunye nokuxhamla. Owona mthombo uya kuhlala ukulungele ukusebenzisana nawe. Masikhule kunye!
Ukuqina kwethu kuthembisa bonke abathengi kwizisombululo zodidi lokuqala kunye nenkampani eyonelisayo emva kwentengiso. Sibamkela ngokufudumeleyo abathengi bethu abaqhelekileyo nabatsha ukuba bazibandakanye nathi kwiFektri yexabiso eliphantsi China High Quality SUS 201/202/304/316 2D, 2b, Ba Finish Cold Cold asongwe Stainless Ikhoyili / Ikhoyili, Kuba umgangatho ophezulu iwelding igesi & ukusika izixhobo ezinikezelwa ngexesha kwaye ngexabiso elifanelekileyo, unokuxhomekeka kwigama leshishini.
Ifektri yexabiso eliphantsi China 304 Isinyithi esongelweyo, Uluhlu lweSinyithi esinoSimbi, Ukusebenza nomenzi wempahla ogqwesileyo, inkampani yethu yeyona ikhethileyo. Wamkelekile ngokufudumeleyo kwaye uvule imida yonxibelelwano. Singamaqabane afanelekileyo ophuhliso lweshishini lakho kwaye sijonge phambili kwintsebenziswano yakho enyanisekileyo.
Ngalesi siqubulo engqondweni, kufanelekile ukuba sikhule sibe phakathi kwezona zinto ziluncedo kakhulu kubuchwephesha, iindleko ezingabizi mali, kunye nexabiso elikhuphisanayo labavelisi be-Big Hot China esonge i-Stainless Steel Coil ka-201/202/304 / 304L / 316L / 904L Umgangatho ophezulu, ukuthengisa kwethu kuthunyelwe eMntla Melika, eYurophu, eJapan, Korea, eOstreliya, eNew Zealand, eRashiya nakwamanye amazwe. Kumlindelo ongaphambili wokwenza intsebenziswano emnandi kunye nehlala ixesha elide kunye nawe kwikamva elizayo!
Isaphulelo esikhulu kwiChina i-Coil ye-Stainless Steel, i-201 yeCoil engenasici, Sabeka inkqubo engqongqo yokulawula umgangatho. Sinomgaqo-nkqubo wokubuyela nokutshintshiselana, kwaye ungatshintshana ngaphakathi kweentsuku ezisi-7 emva kokufumana iiwigi ukuba zikwisikhululo esitsha kwaye sinenkonzo yokulungisa simahla kwiimveliso zethu. Khumbula ukuba uzive ukhululekile ukunxibelelana nathi ngolwazi oluthe kratya kwaye siya kukubonelela ngoluhlu lwamaxabiso aphantsi.
Egqithileyo Umbhobho wesinyithi
Okulandelayo: Isefu engenamthungo kumbhobho wesinyithi